Ururka saxafiyiinta SOJASA oo abaalmarino gudoonsiiyey saxafiyiin Soomaaliyeed.
Sawirro Halkan ka daawo...
Shirweynihii labbaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee K/Afrika ayaa maanta lagu soo gunaanaday magaalada Cape Town, kullanka oo ay kazoo qeybgaleen toboneeyo saxafiyiin ah ayaa looga doodey arrimo baddan oo quseeya saxaafada iyo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan.
Kullanka kadib ayaa abaalmarino shahaadi sharaf ah la gudoonsiiyey saxafi Cabdikariim Mursal faarax oo abaalmarintaasi ku muteystey farsamadiisa gacanta ee heerka saraysa, wwaxaa kale oo SOJASA uu abaalmarin shahaado sharaf ah gudoonsiiyey Saxafi Cabdinaasir Axmed Sh. Bashiir (saxansoxo) oo abaalmarinta ku muteystey xirfadiisa saxafinimo.
Labbadani saxafi waxaa shahaadooyinka gudoonsiiyey Gudoomiyaha ururka Maxamed Muuse Nuur (Deeqdarajo) iyo kuxigeenkiisa Cabdiqaadir Axad Dhaqane.
Waxay noqoneysaa markii ugu horeysey ee SOJASA ay abaalmarino bixiso tan iyo intii la dhisey.
Dhanka kale shirweynaha SOJASA oo ah kii labaad oo la qabto tan iyo intii la asaasay ururka oo ay ku mideysanyihiin inta baddan saxafiyiinta Soomaaliya kasoo qaxday dhawaan.
Shirweynaha waxaa lagu falanqeeyey amuuraha saxafiyiinta iyo ururka, warbixino iyo khudbado ay jeediyiin mas'uuliyiinta ururka, waxyaalihii ururka u qabsoomey waxaa ugu waaweynaa hergalinta labbo wargeys oo lagu kala magacaabo Xog-Maal iyo Qurba-Joog, waxaana la'isla meel dhigey in dhawaan website hawada lasoo galiyo.
SOJASA, Email: Sojasa@live.com